အိမ်ထောင်ဦး ဘုရားတည်၊ ဆေးမင်ရည် စုတ်ထိုး၊ သည်သုံးမျိုး ချက်မပိုင်လျှင်၊ နောင်ပြင်ရန် ခက်ခဲကြုံလိမ့် “ ဟူသော စကားသည် ယောက်ျား နှင့် မိန်းမ နှစ်ဦးစလုံးအတွက် သက်ဆိုင်ပေသည်။
အရှင်ဆန္ဒာဓိက(ရွှေပါရမီ)ဆရာတော်၏ ထားမေတ္တာနှင့် ပွားမေတ္တာ။
မေတ္တာကို ရင်ထဲတွင် ထားရှိပြီး မေတ္တာပွားသင့်ကြောင်း ဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒာဓိက က
ဤသို့ ဆုံးမတော်မူခဲ့ပါ၏။ “တချို့လူများက မေတ္တာပွားတာကို လူသိရှင်ကြားရွတ်ဆို၍သာ ပွား
နေကြတယ်။ စိတ်ကမူ မေတ္တာပို့သနေသောသူများထံသို့ မရောက်ဘဲ ဟိုရောက် ဒီရောက် ဖြစ်
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 6:07 AM No comments:
လောကကို နွေးထွေးစေတဲ့ လက်အစုံများ
“ဗုဒ္ဓဘာသာကို စနစ်တကျ လေ့လာချင်ပါတယ်။ ဘယ်လို လေ့လာရပါမလဲ” လို့ နိုင်ငံခြားသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးက ကျွန်တော်အား မေးဖူးသည်။ အကြောင်းရင်းကို မေးကြည့်တော့၊ “ဟိုဟိုဒီဒီ စာအုပ်တွေ ဖတ်၊ တရားတွေ နာလို့ သိတာတွေလည်း အတော်များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟိုတစ်စ, ဒီတစ်စ ဖြစ်နေပြီး, သေခြာ မသိသေးသလိုဖြစ်နေလို့ပါ” ဟုအဖြေပေးသည်။
၀ိနည်းသာသနာတော်ကို လိုက်နာကျင့်သုံးသောရဟန်းများအတွက် လိုအပ်နေသော ကပ္ပိယ။
ရှင်ရဟန်းတို့မည်သည် ကိစ္စများမြောင် လူ့ဘောင်လောကမှ ခွာရှောင်နေသူများဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်နှင့်အ
မျှ ပရိယတ်၊ ပဋိပတ်သာသနာ့တာဝန်များကို အချိန်ပြည့်ထမ်းဆောင်နေသည့် သာသနာ့ဝန်ထမ်းပုဂ္ဂိုလ်တို့
ဖြစ်သည်။ လူဒါယကာများကဲ့သို့ စားဝတ်နေရေးကို မိမိကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ဖန်တီး သုံးစွဲ၍ မသင့်လျော်ပေ။
လောကမှာ ဘုရားပွင့်လာတာဟာကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းအောင်ပြင်တတ်ဖို့ပါ။
လူ့ရဲ့စိတ်ကိုက “ ပါပသ္မိံ ရမတိ မနော ” တဲ့။ လူ့စိတ်ဟာ မကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲပျော်တယ်။
ဘာဖြစ်လို့ မကောင်းဘက် ပျော်တုန်းဆိုတော့ အကျင့်ကိုက ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတာ။ သံသရာ တစ်
လျှောက်လုံးမှာလည်း မကောင်းတာကျတော့ သိပ်ပျော်တယ်။
“သမ္မာဝါယာမ” ဆိုတာ ဘာပြောတာတုန်းလို့ သမ္မာဝါယာမ အကြောင်းကို အရင်သင်လိုက်၊
ကြိုးစားအားထုတ်မှု” ကို ခေါ်တယ်။
လေးဘက်လေးတန်က ကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတာ ဘာလဲ။
အနာရှိတဲ့လက်နဲ့ ဆားအိုးကိုနှိုက်ရင်……. ???
အနာရှိတဲ့လက်နဲ့ ဆားအိုးထဲကို နှိုက်ရင် စပ်တတ်တယ်။ လက်မှာ အနာမရှိရင်တော့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးပေါ့။ အနာလက်နဲ့ ဆားနှိုက်လို့ စပ်တဲ့အခါ ဆားအိုးကို ဒေါသဖြစ်၊ အပြစ်တင်နေလို့ ကိုယ်ပဲ ရူးရာကျမယ်။ ကိုယ့်အနာကိုယ် အရင်လုံအောင်၊ သက်သာအောင် လုပ်ဖို့ စဉ်းစားတတ်မှသာ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့၊ မှန်ကန်တဲ့ အတွေးအမြင်၊ အသိဥာဏ်ဖြစ်မယ်။
ခန္ဓာသည် ရုပ်နာမ်နှစ်ပါး၊ ခန္ဓာအစုအဝေးသာဖြစ်သည်။ ခန္ဓာတင် အသိစိတ်မရှိ။ နာမ်တရားတွင်
သာ သိစိတ်ရှိသည်။ စိတ်(နာမ်)က ခိုင်းသမျှ ရုပ်ကလုပ်နေရခြင်းဖြစ်သည်။ နာမ်(စိတ်)က အခိုင်းသမား၊
ရုပ်က အလုပ်သမားသာဖြစ်သည်။ ထိုင်ချင်တာကနာမ်၊ ထိုင်တာကရုပ်။ ရပ်ချင်တာကနာမ်၊ ရပ်တာကရုပ်။
“အဆိုးတွေ လျော့ကျပြီးတော့ အကောင်းဘက်ကို ရောက်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ရတယ်”
တဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ပြင်ဖို့ဆိုတာ နေရာဒေသမရွေး၊ အချိန်မရွေး ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ မ
ဟုတ်ဘူး။ “ကောင်းအောင် ပြင်” ဆိုတဲ့နေရာမှာ “ဘယ်ထိအောင် ကောင်းအောင်ပြင်ရမှာလဲ” ဆို
၃၈ - ဖြာ မင်္ဂလာတရားတော် ( 38 Mangalas , Welfares )
၁ . လူဆိုး လူမိုက်ကို မမှီဝဲ မပေါင်းသင်းခြင်း
1. Not to associate with fools.
၂. ပညာရှိ လူလိမ္မာကို မှီဝဲပေါင်းသင်းခြင်း
2. To associate with wise.
3. To honour those-worthy of honour.
သတိပြုဖွယ် မြွေအန္တရာယ်
တစ်နေ့သ၌ မိမိတို့အလုပ်,လုပ်နေကြစဉ်တွင် အလုပ်ထဲသို့ အသက်အားဖြင့် (၂၅ - ၂၇ ) ဝန်းကျင်ရှိသော လူရွယ်တစ်ဦးနှင့် မိန်းကလေးတစ်ဦးတို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည် ။ အစမှာတော့ ကိုယ့်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပဲ အာရုံစိုက်နေတာမို့ သတိမပြုမိသော်လည်း မိမိနှင့်မလှမ်းမကမ်းနေရာတွင် သူတို့နှစ်ယောက်လာပြီး မတ်တပ်ရပ်စကားပြောနေကြတော့ အမှတ်တမှတ်ဆိုသလို ကြည့်လိုက်မိပါ၏ ။
အများနဲ့ ငြိမ်းချမ်းအောင်နေနည်း။ (ယောဆရာတော်ကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဟောကြားသော တရားတော်)
တစ်ယောက်တည်းငြိမ်းချမ်းအောင်နေတတ်မှ အများနဲ့လည်း ငြိမ်းချမ်းအောင်နေတတ်တယ်။
ကိုယ်ငြိမ်းချမ်းအောင်နေတတ်မှ သူများကိုလည်း ငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ တစ်ယောက်တည်း
ငြိမ်းချမ်းအောင်နေနည်းက "သတိ"ပါ။ သတိအမြဲထား နေတာပါ။ တစ်ယောက်တည်း သတိနဲ့ အေးချမ်း
ဘုရားသာသနာတော်မှာ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အကျင့်တရားကလွဲလို့ တခြားကျင့်စရာမရှိပါ။
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အကျင့်တရား ဆိုတာကလည်းပဲ လူတိုင်းလူတိုင်း သန္တာန်မှာ အခြေခံအားဖြင့် ရှိနေတဲ့
တရားပဲ။ ရှိနေတဲ့တရားကို အရှိအတိုင်းသိအောင် လေ့ကျင့်ရမှာ။ ကိုယ့်သန္တာန်မှာဘာတွေရှိတုန်း
အရှင်ဆန္ဒာဓိက(ရွှေပါရမီ)ဆရာတော်၏ ထားမေတ္တာနှင့် ပွားေ...
လောကမှာ ဘုရားပွင့်လာတာဟာကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းအောင်...
အများနဲ့ ငြိမ်းချမ်းအောင်နေနည်း။ (ယောဆရာတော်ကြီးက ...